Mahara Sarudzo Zviratidzo Zvekubatana Chirongwa - free-options-signals
Mahara Sarudzo Zviratidzo Zvekubatana Chirongwa
nzwisisika mabhinari sarudzo zviratidzo zvakabatana chirongwa
Kunze kwekuwana mari pamusika wezvemari, unogona kuita mari nekusimudzira basa redu. Kunyanya izvo, isu takaparura chirongwa chekubatana chebhinari sarudzo dzemasaini. Nekutora chikamu muchirongwa, iwe unogona panguva imwe chete kubatsira vamwe vanhu kuwana sevhisi yedu, kuvabatsira kuona mashandisiro ekushandisa sevhisi yedu, uye kuita mari!
Isu tinobhadhara kusvika ku60% yekomisheni yakabhadharwa nemutengi iyo yakadzvanya pane yako yekuendesa link kana kushandisa yako yakaderera coupon. Isu tinobhadharawo kusvika ku35% yezvese zvinodzokororwa kubhadhara kunoitwa nemutengi wako!
Kana iwe uchida basa redu batsira vamwe kuti riwane uye vashandise!
Bhalisa semubatanidzwa Tora mari yakawanda
Yakabatana link jenareta
Mahara Sarudzo Zviratidzo Mabhanhire
Zvemunhu dhisikaundi makuponi
Hauna kuganhurirwa uye unogona kushandisa chero chaunoda
Kubhadhara kunoitwa vhiki nevhiki
Chidiki Chekubhadhara chikumbaridzo: 30 €
Kunonoka Kubhadhara chikumbaridzo: mazuva gumi nemashanu
Kubhadhara nzira: Paypal kana BTC
Binary sarudzo zviratidzo zvine chekuita nehurongwa hwekomisheni
Base Commission rate iri 40% kubva pakubhadhara kwekutanga uye 25% kubva pane zvese zvinodzokororwa zvinoitwa nemutengi.
Mushure mekutengesa shanu kunoitwa nevatengi vehukama mumazuva gumi nemana, komisheni iri makumi mashanu kubva muzana kubva pamubhadharo wekutanga uye makumi matatu kubva pamitero yose inodzokororwa yevatengi vatsva.
Mushure mekutengesa gumi kwakaitwa nevatengi vehukama mumazuva gumi nemana, komisheni iri makumi matanhatu kubva muzana kubva pamubhadharo wekutanga uye 35% kubva kubhadharo dzese dzinodzokororwa dzevatengi vatsva.
Pamusoro peizvozvo, isu tinewo mamwe mabhonasi anoyevedza. Taura nesu kuti uwane rumwe ruzivo.
Isu tinofara kubhadhara edu emabhinari sarudzo dzemasaini dzakabatana mari!